Ho An’ireo Mpitsoaponenana ao Seattle, Ny Fiakaran’ny Hofantrano dia Midika Fa Tsy Mifarana Ny Fitadiavana Trano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2017 13:00 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, Português, русский, Español, English
Ny 8 May 2017 ity tantara nosoratan'i Isabel Vázquez ity no nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org. Naverina navoaka etoana ho ampahany amin'ny fiarahamiasa misy amin'ny PRI sy ny Global Voices.
Ry zareo Kôngôley no vondrona mpitsoaponenana lehibe indrindra tonga any Etazonia tamin'ny taona lasa, araka ny angondrakitra avy amin'ny Departemantam-panjakana Amerikana navondron'ny Refugee Processing Center. Teo amin'ny 16.000 tamin'ny taom-panisàna lasa. Ireo Kôngôley manakaiky ny 300 izay tonga tao amin'ny faritr'i Seattle tato anatin'ny dimy taona farany dia nahita ny tenany tsy nisy mpijery tao anatin'ireo olan'ny fampiantranoana tao amin'ny faritra.
Any amin'ny faritra an-tanandehibe be mponina, miakatra 6,7 isanjato isantaona ny hofantrano, araka ny tatitra Zillow vao tsy ela akory izay. Raha ampitahaina, ireo faritra hafa misy hofantrano malady misondrotra, toa an'i Los Angeles sy Sacramento dia mahita fisondrotana eo amin'ny 4,7 isanjato eo isantaona raha be indrindra. Hila fanondrotana misimisy kokoa ireo mpampanofa trano ao Seattle ho an'ny vola miditra amin'izy ireo, raha mitaha amin'ireo mpampanofa any amin'ny faritra an-tanandehibe be mponina ao Etazonia, mba ho tafavoaka velona.
Ho an'ireo mpitsoaponenana, mametraka fanamby fanampiny io ho fanombohan-dry zareo fiainana vaovao — iray izay ho atrehan'ny Departemantam-panjakana ao Washington misahana ny tolotra Sosialy sy Fahasalamana amin'ity volana ity ao amin'ny Zaikaben'nhy Fampiantranoana ireo Mpitsoaponenana ao King County amin'ny 24 May. Isan'ireo fikambanana marobe misahana mpifindramonina ho avy handray anjara amin'ny fifanakalozankevitra ny Tambajotra Ho Fampidirana ireo Kôngôley ho anaty fiarahamonina.
Fony izy mpiaramiasa tamin'ny NextGenRadio tao Seattle no nitatitra ity tantara ity i Isabel Vázquez. Eto mijery misimisy kokoa amin'ireo tatitra avy amin'ilay fandaharanasa.